Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Ingxenye yezakhamizi zase-UK ihlela uhambo oluningi ngonyaka ozayo
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba ze-UK Breaking
I-Best in the Industry ihlonishwe e-WTM London
Ukuhweba bekulokhu kubikwa ngesidingo esisabalele sokungena kokuhamba kulo lonke lolu bhubhane futhi lokhu kukhonjiswe ngokwenyuka kwamanani okubhuka noma nini lapho imingcele isuswa.
Ingxenye yamaBrits ihlela amaholide amabili noma ngaphezulu ngo-2022 - kanti u-70% uhlela ukuthatha okungenani iholide elilodwa ngonyaka ozayo, ngokocwaningo olukhishwe namuhla (1 Novemba) yi-WTM London, umcimbi ohamba phambili emhlabeni wonke embonini yezokuvakasha.
Ngaphezu kwalokho, abathengi abane kwabayi-10 bahlose ukuchitha imali eningi ngamaholide kunalokho ababekwenza ngo-2019, kwembula Umbiko Wemboni ye-WTM.
Inhlolovo yabathengi abayinkulungwane, ekhishwe namuhla e-WTM London, ithole ukuthi bangu-1,000% kuphela abangahleli nhlobo, kanti abangama-16% bathi bazoba neholidi elilodwa ngo-22.
Owesithathu (29%) utshele abavoti ukuthi bahlela amaholide ambalwa - okuhlanganisa nekhefu elifushane kanye namaholide amade - kanti u-11% uthe banethemba lokuthatha amathathu. Cishe oyedwa kwabayishumi (10%) uthe bahlela ukuthatha amaholide angaphezu kwamathathu.
Uma kukhulunywa ngezinhlelo zokusebenzisa imali ngamaholide, u-43% uhlose ukusebenzisa imali engaphezu kuka-2019 kanti abangaphansi koyedwa kwabayi-10 (9%) bathi bazosebenzisa imali engaphansi kuka-2019.
Cishe oyedwa kwabayisithupha (17%) utshele inhlolovo ukuthi bazosebenzisa “kakhulu” ngaphezu kuka-2019 - ngenani lama-20% noma ngaphezulu - kuyilapho ikota (26%) ilinganisela ukuthi bazosebenzisa imali ethe xaxa - kuze kufike ku-20% ngaphezulu kuka-2019. .
Owesithathu uthe bazosebenzisa imali efanayo neyangaphambi kwalolu bhubhane.
Okutholwe ngabathengi kusekelwa ucwaningo phakathi kwemboni yezokuvakasha yomhlaba wonke, cishe uhhafu (44%) wezinkampani ezingama-676 ezibuzwe imibuzo yi-WTM London zithi ukubhuka kwazo kuzofinyelela noma kwedlule amazinga abonwe ngo-2019. Izingxenye ezimbili kwezinhlanu (42%) zithi amazinga okubhuka. ngonyaka ozayo usazosilela emuva ku-2019, kanti u-14% wawungenaso isiqiniseko noma ubengazi.
Ucwaningo lukhombisa kahle ukuthi kubuyelwe kabusha imboni yezokuvakasha ephuma eBrithani, iphakamisa ukuthi kunesidingo esinamandla sokubalekela ubhubhane njengoba imikhawulo iba lula.
Njengoba uhambo lwaphesheya kwezilwandle ngo-2020 nango-2021 lungaphansi kakhulu kwamazinga angaphambi kwe-Covid, ucwaningo lunikeza ithemba kuma-ejenti, opharetha kanye nezinkampani zezindiza ukuthi ukubhuka kuzobuyela emuva ngokushesha lapho ukuhamba kuba lula.
NgoSepthemba, izinhlangano zezohwebo ze-Airlines UK kanye ne-Airport Operators Association zatshela uNgqongqoshe Wezokuthutha u-Grant Shapps ukuthi ihlobo lika-2021 "bekuyihlobo elibi kakhulu embonini yethu kunehlobo lika-2020", yengeza: "I-UK isala ngemuva naphezu kohlelo lwayo lokugoma oludlula umhlaba wonke. ”
Isikhumulo sezindiza i-Heathrow, ngokwesibonelo, sabona abagibeli behla ngo-71% ​​ngo-Agasti 2021 uma kuqhathaniswa nenyanga efanayo yangaphambi kobhubhane.
Isikhungo saseLondon sehle ekubeni yisikhumulo sezindiza esimatasa kakhulu eYurophu ngo-2019 saya kowe-10 njengoba izimbangi zilulama ngesivinini esikhulu.
Ngaphezu kwalokho, okutholakele kufana nezinkomba zemakethe ezibonwa kwenye indawo - ehlobo, ucwaningo lwabathengi be-ABTA luthole ukuthi ama-41% asevele enawo amaholide abhukhelwe phesheya izinyanga eziyi-12 ezizayo, kanti ama-35% abhukhe iholidi langaphandle kuleli hlobo. Lezi zinombolo ziphansi kunokwejwayelekile kodwa ziyadalula ukuthi sihlala kanjani isidingo sokuhamba, naphezu kwesimo sezulu esinzima.
Futhi i-Hays Travel, i-ejensi yezokuvakasha enkulu kunazo zonke yase-UK, yabika inzuzo ngo-August, ngenxa yengxenye ye-armada yemikhumbi ehamba ngomkhumbi ehlinzeka ngoseyili wasekhaya ehlobo ezizungeze iBritish Isles.
USimon Press, onguMqondisi Wemibukiso we-WTM London, uthe: “Abahwebi belokhu bebika ngesidingo esisabalele sokuhamba kulo lonke lolu bhubhane futhi lokhu kukhonjiswe ngokwenyuka kwamanani okubhuka noma nini lapho imingcele yehliswa.
“Kodwa-ke, ukungaqiniseki nokudideka mayelana nemithetho yokuvakasha kuvimbe abaningi abebezoba ngamaholide kuze kube manje.
“Njengoba sinethemba elikhulu mayelana nokuvuleka kwemingcele kanye nokwenza lula kwemikhawulo yokuhamba, kubukeka sengathi zonke lezo zinhlelo zamaholide osekunesikhathi eside zibanjiwe zizofezeka, okunikeze imboni ithuba lokululama njengoba sibuyela emaphethini okuvakasha ajwayelekile.”